Isixhobo seDisk Image. I-Clone Drayivu kunye neDiski. Disk Khuphela isoftware.
DataNumen Disk Image sisixhobo esinamandla sokudibanisa kunye nokubuyisela iidiski okanye iidrive. Inokudala kwaye ibuyisele umfanekiso wediski okanye iqhube i-byte yemifanekiso byte. Iluncedo kugcino lwedatha kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo, idiski / ikopi yedrayivu kunye nokwenza ikonon, kunye ne-forensic.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,626)
Ngoba DataNumen Disk Image?
I-Disk Image yagqwesa ezinye iinkqubo ezintathu zobuchwephesha ezingaphumelelanga ukwenza umfanekiso we-ISO-le yasebenza ngokugqibeleleyo. Ngelixa kungenakuba njalo
Bostkwi, MA, eUSA
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Disk Image v2.2
Xhasa zonke iintlobo zeediski kunye nokuqhuba.
Inkxaso yokubuyisela idatha yomfanekiso kwiidrive.
Inkxaso yokulinganisa idatha kwimithombo yeendaba eyonakeleyo.
Inkxaso yokubuyisela amacandelo owonakeleyo ngedatha echaziweyo.
Inkxaso yokwenza ii-disks ezininzi kunye nokuqhuba kwi-batch.
Ilungele ukusetyenziswa njengesixhobo sekhompyuter kunye nokufumanisa ngekhompyuter (okanye ukufunyanwa kwe-e, ukufunyanwa kwe-eDiscovery).
usebenzisa DataNumen Disk Image Yenza Imifanekiso yeeDrives neeDiski
kunye DataNumen Disk Image, Unokwenza imifanekiso yokuqhuba kunye neediski, ngeenjongo ezahlukeneyo, ezinje ngokulondoloza, ukubuyisela, i-forensics kunye nokubuyiselwa kwedatha.
Phawula: Ngaphambi kokudala imifanekiso yedrive okanye yediski nge DataNumen Disk Image, nceda uvale naziphi na ezinye izicelo.
Khetha idrayivu okanye idiski enomfanekiso oza kwenziwa:
Ukuba ufake iplagi kwi-USB drive, kodwa ungayiboni kuqhubo okanye kuluhlu lwediski. Ungacofa indawo
iqhosha kwaye uzame kwakhona.
Emva koko, setha igama lefayile yefayile:
Ungafaka igama lefayile yomfanekiso ngokuthe ngqo okanye ucofe i
ukukhangela kwaye ukhethe ifayile yomfanekiso.
iqhosha, kwaye DataNumen Disk Image Ndiza start Ukuqokelela idatha kwidrive okanye idiski echaziweyo, emva koko uzigcine kwifayile yemifanekiso. Inkqubela phambili bar
iya kubonisa inkqubela phambili yeklone.
Emva kwenkqubo yokuhlangana, ukuba ifayile yomfanekiso yenziwe ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungasebenzisa umfanekiso wediski ngeenjongo ezahlukeneyo, kubandakanya:
Yisebenzise njengogcino lwediski yokuqala okanye idiski.
Buyisela umfanekiso kwi-drive yokuqala okanye kwidiski, okanye kwi-drive eyahlukileyo okanye kwidiski.
Buyisa idatha kumfanekiso.
Yenza uhlalutyo lwedatha lwasenkundleni kumfanekiso.
DataNumen Disk Image 2.2 ikhutshwa nge-24 kaDisemba, 2020
DataNumen Disk Image 2.0 ikhutshwa nge-9 kaNovemba ngo-2020
DataNumen Disk Image 1.9 ikhutshwa nge-14 kaJuni, 2020
DataNumen Disk Image 1.8 ikhutshwa ngoFebruwari 1, 2019
Ukuphucula umsebenzi wokubuyisela idiski.
DataNumen Disk Image 1.6 ikhutshwa nge-12 kaDisemba ngo-2016
DataNumen Disk Image 1.5 ikhutshwa nge-18 kaJanuwari, 2015
Inkxaso yokubuyisela imifanekiso kwiidrive.
DataNumen Disk Image 1.1 ikhutshwa nge-21 ka-Okthobha ka-2014
Ukuphucula isantya sokulinganisa.
Yongeza ulwazi lweenkcukacha manani lwenkqubo yokulinganisa.
DataNumen Disk Image 1.0 ikhutshwa nge-9 Septemba 2014
Inkxaso yeWindows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 kunye neServer 2003/2008/2012.
DataNumen Backup sesona sixhobo silungileyo sokubuyisela kunye nokubuyisela idatha kunye neefayile zakho ezibalulekileyo.